December 17, 2011 by chowutyee အနောက်တိုင်းစတိုင် အားလူးကက်တလိပ်ကြော်
wow it look yummy…thx for posting😉 i will really try tonight…i tired before but didn’t success 😛
haa ok pls try it😉
Taste so nice! Better than traditional အာလူးကပ်တလိပ်! Perfect match with mayonnaise😉
သိဆို ဒီပုံထဲက ဟင်းကို စားထားတာကိုး😀
Thanks for yours info!!🙂
မခင်ယမုံကိုလည်း ၀တ်ရည်က ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အမြဲအားပေးလို့။ နောက်ထပ် ကင်နည်းလေးတွေ ထပ်တင်ပေးအုန်းမယ်။ ကျွေးချင်တယ် ဆိုတဲ့ စေတနာနဲ့တင် ၀တ်ရည် တကယ် ဗိုက်ပြည့်သွားပြီ။ ကျေးဇူးပါနော်..🙂